Odisha Spritual Tour | Gaa n'ụlọ nsọ ndị dị ebube nke Odisha
Njem ime mmụọ ofufe Odisha
Odisha bụ ala nke ihe ọkụkụ ime mmụọ siri ike, oleekwa ụzọ dị mma iji nweta nke a karịa njem ime mmụọ Odisha. A na-ekwukarị na ájá ájá na-egosi na ọ dị oké mkpa nke njem nleta ime mmụọ nke Odisha. E gosipụtara ihe ndị a na-egosi na obodo dị iche iche na nchịkọta njem nlekọta nke ụlọ ọrụ ahụ chepụtara. Nchịkọta ndị ahụ na-egosipụta n'ụzọ doro anya ntụgharị uche ime mmụọ nke Odisha. 'Odisha Tour na temples' bụ n'ezie oge ndụ nke Sand Pebbles nyere. The 'Bhubaneswar Special Tour' na-ekpughe ndị njem nleta na nkume pel kacha mma nke na-egbukepụ na Capital City. Otú ahụkwa ka ndị ọzọ na-eme njem nleta ime mmụọ na-ekpuchi Puri, Konark, Chilika, Bhitarkanika, na Similipal. Puri-Mangalajodi-Gopalpur-Chandragiri package na Bhubaneswar - Puri - Barkul - Gopalpur - ngwugwu na-ebuli mmụọ ndị njem nleta elu. Ebe ndi njem nlebara anya nke Kolkata - Gangasagar - Sundarbans bu ndi eji eji ya eme ihe iji megharia njem ime mmuo nke India.
Sand Pebbles na-agbasi mbọ ike iji hụ na ndị na-eme njem nleta nwere ohere zuru oke iji gosipụta ha n'ime onwe ha ma nweta ahụmahụ na-emeghe anya na ngọngọ ime mmụọ anyị. Sand Pebbles ahapụghị nkume ọ bụla na-enye ndị na-eme njem nleta na ọ na-atọ ụtọ na-ebugharị ha site na ebe a na-eme njem nlegharị anya dị nsọ nke Overwhelming Odisha
Njem Odisha na Ụlọ Nsọ
Bhubaneswar-Konark-Puri Tour ngwugwu